Mareykanka oo dalbaday in degdeg loo furo Radio Daljir & Wasiir Soocade oo baxar ku jira - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Mareykanka oo dalbaday in degdeg loo furo Radio Daljir & Wasiir Soocade oo baxar ku jira - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Mareykanka oo dalbaday in degdeg loo furo Radio Daljir & Wasiir Soocade oo baxar ku jira
Dowladda Maraykanka ay si kulul oo aan hore loo arag uga hadashay xariga Radio Daljir oo uu dhowaan xirtay Wasiirka Warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade, isagoo caddeeyay in tallaabadaasi ay ka hor imaanayso xuquuqda qofku iyo fekerka xorta ah.
Mareykanka ayaa si toos ah u dalbaday in dib loo furo Idaacadda Daljir, waxaana maamulka Puntland laga dalbaday inay dhowrto sharciyada caalamiga ah iyo Dastuurka.
War ka soo baxay ergada Mareykank u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xariga Idaacadda Daljir uu yahay mid xadgudub ku ah xoriyadda saxaafaddu oo ka mida xuquuqda caalamiga ah ee ku qeexan Article 19 Universal Declaration of Human Rights, iyo weliba Dasuurka Soomaaliya qodobkiisa 18.
Ergada Maraykanka Soomaaliya u qaabilsan ayaa warkooda ku dalbaday in si degdeg ah oo aan dib u dhac lahayn loo fasaxo Idaacadda Daljir. Waxaana Mareykanka uu bogaadiyay halganka saxafiyiinta Soomaaliyeed ku jiraan xaaladan adag.
Wasiirka Warfaafinta Puntland ayaa la sheegay in xaalad adag soo wajahday kadib warkii hanjabaadda ahaa ee laga shaaciyay waxaana fariimo uu ka helay wakiilada beesha caalamka qaarkood oo u sheegay inay la yaabeen falalkiisa, waxaana cadaadis saaran yahay madaxweyne C/weli Gaas lagu doonayo in xilka looga qaado wasiir Soocade oo noqday fadeexad u joog.
HOOS KA AKHRI QORAALKA OO AF INGIRIIS AH
Previous articleYaa ka danbeeyay xil ka qaadista wasiiradii Waxbarashada & Caafimaadka..? [XOG CULUS]
Next articleWaanwaan hordhac ah oo laga dhex bilaabay C/sallaan Gallan & Maamulka Puntland